हाम्रा बाउ–बाजेले भनेका थिए । यहाँ ठूलो तोरी पेल्ने कोल थियो । चारैतिरका मानिसलाई पाई पर्ने भएकाले पनि यहाँ टाढा–टाढादेखि कोलमा तोरी पेल्न आउने गर्थे । पछि यसको लोकप्रियता बढ्दै गएर ‘कोहलपुर’ नाम चलन चल्तीमा आयो ।’
‘टोन’ मा के छैन ?
तिमी कि टिमी ? कुन ठीक ? थारू साहित्यिक बहस यहींबाट तात्तियो । त र ट मा मत बाझियो । अनि खोजी हुन थाल्यो, थारू शब्द लिपिको । पुर्खौंदेखि गाइने गीतको संग्रह (पोठी) लाई प्रमाणका रूपमा पेस गरियो । जुन थारू भाषामै लेखिएका छन् । नयाँ पिँढीले पोठीको कतिपय अक्षर चिन्दैनन् । तर पाकाहरूले मजाले वाचन गर्दै गीत गाउन सक्छन् ।
बाँच्नका लागि कसैले गरेको संघर्ष देख्दा माया पलाएर आउँछ । अघिल्लो साता यस्तै देखियो सदर चिडियाखानामा । त्यहाँको पोखरी नजिक डिलमा ठूलो घाउँके हावासिल चराले यस्तै संघर्ष गरिरहेको थियो । उसले खानका लागि संघर्ष गरिरहेको थियो ।
कस्तो हुनेछ तपाईंको मृत्यु ? केही सोच्नुभएको छ यस विषयमा ?’प्रश्न सुनेर उनले मेरो आँखामा गडेर हेरे । उमेर बढ्दै जाँदा कसै–कसैलाई आफ्नो मृत्युको पूर्वाभास हुन्छ । म जान्न चाहन्थेँ, उनका मनमा पनि त्यस्तो कुनै ठाँटो बसेको छ कि ?
साँच्चै मोहमद सलाह र जोसे मोउरिन्होबीचको सम्बन्ध कस्तो होला ? अथवा थियो भनौं ? कुनै समय दुवै सँगै चेल्सीमा थिए । अचेल न त सलाह ती दिन सम्झन चाहन्छन्, न त मोउरिन्हो ।
नेपाल गए कपालसँगै, बर्मा गए कर्मसँगै । जहाँ गए पनि आफ्नो दु:ख आफैंसँग छ भन्ने आशयको यो परम्परागत युक्तिले ‘कालो पानी’ पारिको बर्मासँगको झन्डै दुई शताब्दी लामो नेपाली साइनो सम्झाउँछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको खोजी
(अ)न्यायका सम्बन्धमा मार्टिन लुथर किङ भन्ने गर्थे— कुनै एक ठाउँको अन्याय सबैतिरको न्यायका लागि धम्की हो । न्यायप्रतिको उच्च आग्रह सम्झनुपर्दा संसारको जुनसुकै कुनामा पनि झट्ट उनको सम्झना आइहाल्छ ।
घाँसको भारीसँगै हिमा नदी तरेर आइन्, निरमाया नेपाली । किनारमा भिरालो परेरको ढुङ्गामा भारी बिसाइन् । त्यही भारीमा ढेसिएर बगेको हिमा नियाल्दा पानीको बहाव उस्तै थियो । जस्तो बहाव उनका श्रीमान्ले सात वर्षअघि कालपार जानका लागि तर्दा थियो ।
देश गाउने कवि
देउताको घरबाट आउने कुनै चामत्कारिक वा प्राकृतिक वरदान होझैँ लाग्थ्यो कविता, जति बेला माधवप्रसाद घिमिरे मस्र्याङ्दी नदीको किनारैकिनार दगुर्दै लमजुङको पुस्तुन फाँटमा धानका बालाहरूका बयलीमा आफ्नो आवाजलाई मिसाउँदै लोकगीत गुन्गुनाउँथे ।
बा अब यो घरमा हुनुहुन्न । बा बित्नुभएको पनि दुई दशक बितिसक्यो । तर, बा हिजो साँझसम्म यही चाक्सीको बोटमुनि राखिएको बेतको कुर्सीमा बसिरहनुभएको आभास हुन छाडेको छैन ।
प्रेम, विवाह र प्रेम–विवाह
विवाह के हो ? यो प्रश्नको मोटामोटी सबैलाई चित्त बुझ्ने उत्तर तयार पार्नु सम्भव छ । तर ‘प्रेम के हो ?’ भन्ने प्रश्नको सबै वा धेरैजसोलाई समेत चित्त बुझ्ने जवाफ दिनबाट ठूल्ठूला साहित्यकार र दार्शनिकसमेत चुकेका छन् ।
भिनस, अनारकली, मधुबाला
भेलेन्टाइन डे’ मा जन्मेको म एकै व्यक्तिलाई जान्दछु यस संसारमा । तर मैले जानेको यही एक हुन्, जसले ‘प्रेम–दिवस’ का दिन जन्मेर आफ्नो समयका मानिसलाई ‘चकाचौंध’ बनाइन् । उनलाई ‘भिनस’ भनिन्थ्यो । उनको नाउँ मुमताज थियो ।